« Miareta tory ianareo, ka mivavaha, mba tsy hidiranareo amin’ny fakam-panahy » Mar. 14:38
Maro no matory ankehitriny , tahaka ireo mpianatra. Tsy niambina sy nivavaka izy ireo mba tsy hidirany amin’ny fakam-panahy.
Aoka hiambina ny fanahy tsirairay. Manara-dia anao ny fahavalo. Aoka ho mailo, hiambina tsara mba tsy hisy hametraka fandrika amin’ny fomba feno hafetsena ka hahazo anareo tampoka izany. Aoka ireo miraviravy tanana sy tsy miraika hampitandremana mba tsy ho tonga tampokaamin’izy ireo toy ny fiavian’ny mpangalatra amin’ny alina ny andron’ny Tompo.
Tsy maintsy miambina izay te handresy, fa amin’ny fifangaroana amin’izao tontolo izao sy ny hadisoana ary ny zava-manitaitran i Satana dia mikely aina fatratra mba hambabo ny mpanara-dia an’i Kristy. Tsy ampy ny fialantsika fotsiny amin’ny loza mahatsiravina sy ny fihetsika mampidi-doza. Tokony tsy hiala eo anilan’i Kristy isika, handeha eo amin’ny lalan’ny fandavan-tena sy ny fanaovana sorona tena. Eto amin’ny tanim-pahavalo isika. Ikay voaroka avy tany an-danitra dia latsaka teto amin’ny hery lehibe. Mikatsaka izay hampilavo lefona ny fanahy izy, amin’ny alalan’ny fitaovana sy fambaboana azo foronina rehetra. Raha tsy miambina mandrakariva isika dia ho tonga haza mora azon’ireo famitahany tsy ary ho voatanisa.
Fampitandremana , fananarana, fampanantenana, antsika avokoa izany rhetra izany, ambara-pahatogan’ny fahataperan’izao tontolo izao. “Koa dia mba aza matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambina ka hahonon-tena” 1 Tes. 5:6. Mianmbena amin’ny hevipetsin’ilay fahavalo, miambena amin’ny fahazarana taloha sy ny fironana voajanahary , mba tsy hanamarina ny tenany ireo; tohero hihemotra izy ireo ary miambena. Ambeno ny fisainana, ambeno ny drafitra, mba tsy hifantoka amin’ny tena. Ambeno ny fotoana fanararaotana mba hanaovan-tsoa amin’izy ireo.
Raha manatona an’i Jesosy ianao ka mikatsaka nanaingo ny asanao amin’ny fiainana voalamina tsara sy ny resaka tsara, dia ho voaaro tsy hizotra ho any amin’ny lalana voarara ny tongotrao. Raha hiambina fotsiny ianao, hiambina hatrany ka hivavaka, raha hanao ny zavatra rehetra toy ny hoe eo ambany fanatrehan’Andriamanitra mivantana ianao, dia ho voavonjy tsy ho lavo amin’ny fankam-panahy , ary afaka manantena ny hotehirina ho madio, tsy misy pentina, ary tsy voaloto hatramin’ny farany. Raha mihazona ny fiantombohan’ny fahatokianao hijoro tsara hatramin’ny farany ianao, dia hampiorenin’Andriamanitra ny lalanao; ary izay natomboky ny fahasoavana, dia hosatrohin’ny voninahitra diadema any amin’ny fanjakan’ny Andriamanitsika.